DAAWO Sawirrada, Madaxweyne Xasan Sheekh oo Cadaado si weyn loogu soo dhoweeyey – Radio Muqdisho
DAAWO Sawirrada, Madaxweyne Xasan Sheekh oo Cadaado si weyn loogu soo dhoweeyey
Cadaado, 14 Abriil 2015, Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa maanta socdaal shaqo ku yimid magaalada Cadaado ee Gobolka Galguduud isaga oo ay wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan labada Gole.
Madaxweynaha socdaalkiisu waa lugtii ugu dambeysay ee socdaallo dhowr ah oo uu ku tegey Gobobollada Dhexe si uu u dardar geliyo howlaha qaban qaabada shirka lagu dhisayo Dowlad Goboleedka Mudug iyo Galguduud oo hadda maraya heer gebo gebo ah.
Cali Guudlaawe oo Jowhar gaaray
Madaxweynaha Dalka oo ubax dhigay taalada Daljirka Dahsoon “SAWIRRO”
Wafuud ka socda degaannada Gobollada Dhexe ayaa ku qulqulaya degmada Cadaado, halkaas oo ay ballantu tahay in uu berri ka furmo shirka lagu dhisayo Dowlad Goboleedka Gobollada Dhexe.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diirran ugu soo dhoweeyay magaalada Cadaado Madaxda degaanka iyo dadweyne fara badan oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdiraxmaan Odowaa, oo hoggaaminayay wafdiga hordhaca ah eek a horreeyay wafdiga Madaxweynaha.
Maxaa loola jeedaa Jihaad, dagaallada Soomaaliya ka socdase Jihaad ma lagu tilmaami karaa?
Wasiirka Amniga “howlgal lagu soo gabagabeynayo Al-Shabaab ayaa dhacaya” (Shir jaraa’id)
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta dib ugu laabtay Caasimada Jowhar kadib safar uu dhawaanahaan ku...
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xusaya sannad-guurada 62-aad ee xornimada iyo midnimada dalka, ayaa ubax dhigey...
Ergeyga XFS ee Ururka Iskashiga Islaamka oo la kulmay xubno ka tirsan Ururkaasi
Ergeyga Joogtada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya u fadhiya xarunta Ururka Iskaashiga Islaamka Ibraahim Adan Muusa ayaa la kulmay madaxa qunsulka...
Xuska 1da Luulyo oo caawa lagu qabtay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka
Guud ahaan Soomaaliya ayaa looga dabaal dagay sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii Gobollada Koonfureed ay ka xuroobeen gumeystihii Talyaaniga...